माथागढी गापामा काँग्रेसको समूह विजयी
रामपुर,असार १७ -पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । अध्यक्षमा सन्तोषकुमार थापाले छ हजार ९६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा ९एमाले० का विमल काफ्लेले चार हजार २१ मत प्राप्त गर्नुभयो । त्यस्तै उपाध्यक्षमा काँग्रेसकै निर्मला भट्टराईले पाँच हजार ६२४ मत प्राप्त गर...
अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहका ३४ वडाको परिणाम सार्वजनिक
अर्घाखाँची असार,१७ । अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहका ३४ वडाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसमा सितगंगा नगरपालिकाका १०, सन्धिखर्क नगरपालिकाका ५, भुमिकाथान नगरपालिकाका ४, छत्रदेव गाउँपालिकाका ५, मालारानी गाउँपालिकाका ५ र पाणिनी गाउँपालिकाका ४ वडाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । एमाले विजयी भएका वडाहरु १. छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ७, भगवती शोभाखर पा...
मत बराबरी आएपछि चिठ्ठाबाट एमाले उम्मेदवारको जति
असार,१७ । रेसुंगा नगरपालिकाको वडा नं ४ मा कांग्रेस एमालेका वडाध्याक्षबीच रोचक प्रतिस्प्रर्धा भएको छ र एमाले उम्मेदवारले जति हात परेका छन् । वडा नं ४ मा एमालेका वडाध्याक्षका उमेदवार विजय मरासिनी र कांग्रेसका लिलाधर आचार्यको मत बराबर भएपछि चिठ्ठाबाट वडा अध्यक्षको फैसला भएको छ । मत बराबर भएपछि गोलाप्रथा गरेर वडा अध्यक्षको फैसला गरिएको हो वड...
गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा एमाले विजयी
गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको छ । अध्यक्षमा एमालेका रिपबहादुर थापा विजयी हुनुभएको हो । उहाँले ४ हजार ४२ मत प्राप्त गर्नुभयो । कांग्रेसका ज्ञानबहादुर कार्कीले ३४ सय ४७ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै देवा अर्याल विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ४ हजार २५ मत ल्याउनुभयो । कांग्रेसकी सीता अर्यालले ३७ सय ५९ मत प...
असार १७ २०७४ रासस
नवलपरासी असार १७, - नवलपरासीमा मतगणना सम्पन्न भएको दुई गाउँपालिकामध्ये एक स्थानमा नेपाली काँग्रेस र एक स्थानमा नेकपा ९एमाले० विजयी भएका छन् । प्रतापुर गाउँपालिकामा काँग्रेस र सुस्ता गाउँपालिकामा एमाले विजयी भएको हुन् । प्रतापुरमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका खेमनारायण चौधरीलाई सात सय नौ मतले पराजित गर्दै काँग्रेसका राजकुमार शर्मा अध्यक्षमा विजयी...
दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादी विजयी
दाङ । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्रका भक्तबहादुर वलीले निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका भोजराज पाण्डेलाई ८३७ मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन् । विजयी वलीले ३३५२ मत प्राप्त गरेका छन् भने पाण्डे २५१५ मत ल्याएका छन् । त्यसैगरी उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका यमुना घर्तीले ३३७१ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने...
प्रदेश न. १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहको नतिजा
नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राप्रपा फोरम-नयाँ शक्ति फोरम लोकतान्त्रिक अन्य जित ४ ६ २ ० ० ० ० अग्रता ८२ ७९ ३२ ५ ३ ५ ४ महानगर र उपमहानगरको मत परीणाम बुटवल उपमहानगरपालिका शिवराज सुवेदी २०१७ खे...
प्यूठानको नतिजाः एमाले ७, माओवादी र राजमो ४-४ वडामा विजयी
प्यूठान असार १६। दोश्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्ला प्यूठानमा मत गणनाको नतिजा आउने क्रम शुरु भएको छ । शुक्रवार विहानसम्म १७ वटा वडाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । २ नगरपालिका सहित ९ स्थानीय तह रहेको प्यूठानमा ६४ वटा वडा रहेका छन् । जसमा नेकपा एमालेले ७ वडामा विजय हाासिल गरेको छ । माओवादी केन्द्रले ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा ४ ...
दाङ बङ्गलाचुली–२ मा माओवादी केन्द्र विजयी
असार १६ २०७४ रासस
दाङ -बङ्गलाचुली गाउँपालिका–२ मा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का मेघराज रानाको प्यानल नै विजयी भएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकाका मैते पुनलाई ६ मतको झिनो अन्तरले पराजित गरी राना विजयी हुनुभएको हो । विजयी रानाले ३३६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी पुनले ३३० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै, महिला सदस्यमा हिमा थापा, दलित महिला स...
गुल्मीमा एमालेका विजयी सुरुवात
गुल्मी । गुल्मीमा दुई गाउँका वडा अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी हुनुभएको छ । गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाको वडा नम्वर एकमा माओवादीकेन्द्र र काग्रेसको तालमेललाई तोड्दै एमालेका उम्मेदवार रामवहादुर विक बिजयी हुनुभएको छ । त्यस्तै गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको वडा नंम्वर एकमा पनि एमाले उम्मेदवार रामवहादुर पल्ली विजयी हुनुभएको छ । यी गाउँपालिका प्रमुख र...
दाङको दंगिशरणमा एमाले विजयी
दाङ । काँग्रेसको किल्ला मानिने दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा नेकपा एमाले प्यानलसहित विजयी भएको छ । वडा अध्यक्षमा एमालेका श्रीप्रसाद चौधरी प्यानलसहित विजयी हुनु भएको छ । त्यसैगरी उक्त वडामा एमालेकै महिला सदस्यमा नन्दाकुमारी बस्नेत, दलित महिला सदस्य अमृता विक र सदस्यमा जानकी चौधरी, उमेश चौधरी विजयी हुनु भएको छ ।
रोल्पामा सुकीदह-१ मा कांग्रेस प्यानलै विजयी
रोल्पा असार,१५ । रोल्पा जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसले सुकिदह विजयी भएको छ । गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ । वडाअध्यक्ष अजमत डाँगी ३२२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका चुडामणी ओलीले २२७ मत पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार खुशलसिंह विकले १९९ मत पाएका छन् ।
नवलपरासीको प्रतापपुर १ बाट काँग्रेसको विजयी
नवलपरासी असार १५। नवलपरासीको प्रतापपुर १ बाट काँग्रेसले विजयी सुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं १ मा नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर चौधरी विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत माधव ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले ५ सय ६१ मत ल्याएका छन् । वडा अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार गोमन प्रसाद थारुले ३ सय २६ मत ल्याए। त्यस्तै, महिला सदस्यमा कल्पना चौधरी, दलित महिला सद...
मतपेटिकामा एसिड हालिएपछि रोल्पाको भनभनेमा मतदान रोकियो
रोल्पा,असार १४ रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर १० दबाङस्थित भनभने मावि मतदान केन्द्रमा अज्ञात व्यक्तिले मतपेटिकामा प्रज्वलनशील पदार्थ खसाल्दा एउटा मतपेटिका जलेको छ। त्यहाँ एसिड खसालिएको थियो। प्रहरीले कसले यस्तो गर्‍यो भन्ने खुल्न नसकेको बताएको छ। अहिले सो केन्द्रको मतदान स्थगित भएको छ। एसिडले चार वटा मतपत्र जलेको पाइएको र सो बुथको मतदान हा...
'७ बजे नै आएपनि अझै मत हाल्न पाईन':विष्णु पौडेल
बुटवल असार १४ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा अझै सम्म पनि मतदान सुरु हुन सकेको छैन । वर्षात्का कारण अझैसम्म पनि मतदान सुरु हुन नसकेको हो । पानीका कारण डिभिजन कार्यालयको मतदानस्थल लगायतका अधिकांश मतदानस्थलमा मतदान सुरु हुन नसकेको हो । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मतदान गर्ने मतदान केन्द्रमा पानीका कारण उनले अझैसम्म पनि मतदान गर्न नपाएको गुनासो ...
सभामुख घर्तीले गरिन् मतदान
रोल्पा असार,१४ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले रोल्पा नगरपालिकाको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । उनले रोल्पा नगरपालिका वडानम्बर ७ को बालउदय मावि जंकोटबाट बिहान मतदान गरेकी हुन् । रोल्पामा १० स्थानीय तह छन् । रोल्पामा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली बिहानै मतदान !
तम्घास ,असार १४ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेताहरु उत्साही भएर मतदान गरेका छन् । यसै क्रममा प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत गुल्मी जिल्लाबाट नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बिहानै मतदान गरेका छन् । उनले रुरु गाउँपालिका ४ बम्घा निमावि मतदान केन्द्र ‘क’ बाट मतदान गरेका हुन् । उनले निकै उत्साही हुँदै फेसबुक र ट्वीटरमा फोटोसमेत पोष्ट ग...
काठमाडौँ, असार १३-आसन्न स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब छ लाख यात्रु बाहिरिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यही असार १४ गते प्रदेश नं १, ५ र ७ मा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने क्रममा काठमाडौँबाट ती प्रदेशमा जाने यात्रुको चाप बढेको जनाएको छ । निर्वाचन हुन लागेका विभि...
रामपुर असार १३ । नेपाली काँग्रेस पाल्पाले आफ्ना तीनजना सक्रिय सदस्यता लिएका कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ । काँग्रेस सचिव झपेन्द्र गहिरेका अनुसार तानसेन नगरपलिका–२ का सक्रिय सदस्य ब्रजेन्द्र प्रधान, तानसेन–४ का अनुपमान कर्माचार्य र बगनासकाली–२ पोखराथोकका देवीप्रसाद न्यौपानेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ । उनीहरुले पार्टी...